यस्तो थियो घोराहीमा काँग्रेसको प्रर्दशन (तस्विरमा) « Farakkon
यस्तो थियो घोराहीमा काँग्रेसको प्रर्दशन (तस्विरमा)
दाङ,माघ २१ । दाङमा नेपाली काँग्रेसले एक वर्षपछि बल्ल आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । घोराहीस्थित पार्टी कार्यालय बाट सयौंको संख्यामा नारावाजी गर्दै बजार परिकर्मा गर्दा धेरै काँग्रेसी उत्साहित देखिन्थे ।
बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मलापन्तको परिवारले न्याय नपाएको कुरा र डा. गोविन्द केसीसंग गरेको सहमती अक्षरस पालना गर्नुको साटो हालै पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको कुरा प्रमुख रुपमा ¥यालीमा उठाइएको थियो ।
त्यस्तै उनीहरुले ३३ किलो सुन काण्डका ठूला माछा पक्राउ नपरेको, वाईडवडी प्रकरणका भ्रष्टचारीलाई चोख्याउन खोजेको जस्ता नारा घन्काएका थिए ।
विरोध ¥यालीमा सहभागी काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा पनि चर्कौ आक्रोस पोखे । यसपालीको हैजा केपी ओलीलाई लैजा, केपी ओली मुर्दावाद, असक्षम केपी ओली चाहिदैन, केपी तिम्रो पाराले दुःख पाए साराले, चर्कौ मुल्य बृद्धि फिर्ता गर जस्ता नारा लगाउँदै बजार परिक्रर्मा गरेका थिए । दाङमा भएको प्रर्दशनमा ५ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङलाई तोक्न मागपनि गरिएको थियो ।
सयौंको संख्यामा सहभागी ¥यालीमा काँग्रेस सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक गिरी, प्रदेशसभाका सदस्य द्धय डिल्लीबहादुर चौधरी र अर्जुन श्रेष्ठ, जिल्ला पार्टी सभापति कीर्तिबहादुर खड्का, पूर्व सांसदद्धय बुद्धिराम भण्डारी र राजु खनाल, जिल्लाका पार्टी पदाधिकारी, अग्रज नेता तथा विभिन्न संग संगठनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।